कोरोनाबारे बालुवाटारमा ब्रिफिङ: आदेश पालना नभए लकडाउन ! - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
कोरोनाबारे बालुवाटारमा ब्रिफिङ: आदेश पालना नभए लकडाउन !
लेखक : लेखापढी ११ बैशाख २०७८, शनिबार २०:१८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन सकिए लगत्तै शनिबार अपरान्ह कोरानाको जोखिम कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने उपायको खोजीमा लागे । बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित ८ मन्त्री, १२ जना सचिव, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु र अन्य केही कर्मचारीको संलग्नतामा एउटा महत्वपूर्ण बैठक बस्यो । बैठक कोरोनाको बढ्दो जोखिमबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङका लागि आयोजना गरिएको थियो ।
बैठकमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिमा आवद्ध मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता थियो । त्यहाँ कोरोनाको जोखिम, यसमा भइरहेका प्रयासहरु, सरकारले भोगिरहनुपरेका समस्याबारे कर्मचारीका तर्फबाट प्रस्तुती गरिएको थियो ।
त्यस्तै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी) का अधिकारीहरुले पनि प्रस्तुती गरेका थिए ।
आदेश पालना नभए लकडाउन !
स्रोतका अनुसार शनिबारको ब्रिफिङमा सहभागी सबैको साझा निष्कर्ष के थियो– सरकारले बैशाख ६ गते जारी गरेको आदेश कतैबाट पनि पालना भएन । कलेजका विद्यार्थीहरु पनि सडकमा देखिए । सार्वजनिक यातायात र फुटपाथको भीडभाड पनि उस्तै देखियो । कार्यालयहरूमा कर्मचारी घटेका छैनन्, जात्रा र कार्यक्रमहरुमा भीडभाड देखियो । सिमानामा होल्डिङ सेन्टरहरु बनाउने भने पनि आवतजावत अनियन्त्रित रह्यो । अस्पतालहरुमा बेड र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन थालिसक्यो । सबैतिर लठिभद्र स्थित देखियो ।
यसरी सरकारी आदेश र निर्णयको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने र कार्यकालमा आधा कर्मचारीमात्र राख्ने प्रावधानमा जानुपर्ने हुन सक्ने सरकारी कर्मचारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सुझाएको स्रोतले बतायो ।
बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार शनिबार बालुवाटारमा ब्रिफिङ मात्रै भएको हो, त्यहाँ कुनै निर्णय भएको छैन । लकडाउन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन नगरी सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने र कोरोना चेन ब्रेक गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने ५ कम्पनिलाई कारबाही
काठमाडौंमा २०८५ सहित उपत्यकामा २५४० संक्रमित थपिए
भारतद्वारा डिसेम्बर ३१ सम्म बेलायती उडानहरू स्थगित
अमेरिकामा दिमाख खाने नयाँ भाइरसको संक्रमण
पोर्चुगलमा पनि पुनः देशव्यापी लकडाउन
भारतले उत्पादन गरेको कोरोना खोप नेपाल सहित छिमेकी देशलाई अनुदानमा दिने
रुसमा दैनिक कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा धेरै कमि
रगत जम्ने खतरा देखिएको भन्दै थाईल्यान्डमा कोरोना खोप अभियान स्थगित
उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयमा एक साताका लागि अत्यावश्यकबाहेक काम बन्द
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा विभिन्न खोप केन्द्रको निरीक्षण
देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार छु : प्रचण्ड
मुख्य समाचार, लिंक/पत्रपत्रिका, वातावरण
जंगली अर्किडको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड